Iingcebiso ezi-6 ezilula zokunciphisa umzimba ngokusisigxina Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Iingcebiso ezilula ezi-6 zokunciphisa umzimba ngokusisigxina
Ekugqibeleni uthathe isigqibo sokutshintsha imikhwa yakho kwaye unciphise umzimba. Uqale ukuzilolonga kunye nokutya ukutya. Nangona kunjalo, emva kwexesha lokuphinda kufundiswe ukutya, uqala ukuziva elahlekile kwaye engenalo ihlombe lokuqala.
Wonke umntu udlula kwesi sigaba ngelinye ixesha kuhambo ekhangela ubomi obunempilo, ngamanye amaxesha rhoqo. Kodwa inyani kukuba inkuthazo ikwanamahla ndinyuka.
Ukuhlala ukhuthazekile kwaye ube nokulahleka kwesisindo okusebenzayo, jonga iingcebiso ezintandathu ezilula kunye nezisebenzayo zokutshintsha imikhwa kunye nokufikelela kwiinjongo zakho:
1 Zibekele usukelo
2 Vavanya inqanaba lokuzibophelela kwakho
3 Ngaba uyafuna ukunciphisa umzimba okanye ukunciphisa umzimba?
4 Ngaba unayo inzuzo yokuhlala utyebile?
5 Zilahle iingcinga ezizenzekelayo
6 yenza into ekonwabisa
Yintoni eyona njongo yakho iphambili: ukungena kwilokhwe yomtshato? Yenza intle ngehlobo elizayo? Ukufumana kwakhona ukuzithemba kwakho? Impilo engakumbi? Nokuba injani na injongo yakho, ukuyazi kubalulekile.
Thatha ithuba kwaye ucinge ukuba kuxhomekeke kuwe kwaye nini kanye kanye xa ufuna ukuba kwenzeke (khetha umhla) kwaye ukuba uzimisele ukuwufezekisa kwinkampani yomntu okhethekileyo okanye uwedwa. Ke, qhubela phambili utshatise iindlela eziza kukusa kwindawo oya kuyo.
Khawufane ucinge ukuba ukhwele iteksi kwaye xa umqhubi ekubuza ukuba ufuna ukuya phi, awazi. Indawo ekuyiwa kuyo inokungaqiniseki ncam. Ke injongo yakho kufanelekile ukuba uyazi.
Vavanya inqanaba lokuzibophelela kwakho
Cinga kwindawo nganye yokufumana kwakhona ukutya kwakhona. Njani ukusetyenziswa kweenkozo zizonke, umzekelo? Nokwenza umthambo?
Qiniseka ukuba uhlawula ikakhulu ezo nkcukacha zivelisa ukonwaba. Luluphi ukwaneliseka kwakho kuwo onke? Ukusuka ku-0 ukuya ku-10, ungabeka eliphi inqanaba? Yintoni ongayenza ukwandisa eli nqanaba? Cinga malunga nokuba kutheni le mimandla yobomi bakho ikumgangatho ophantsi kangako. Ngaba kungenxa yokungabikho kolungelelwaniso lwenkqubo yakho, uqeqesho, ucwangciso, ubuvila? Ngokuchonga ezi zinto, uya kuyazi indawo onokuphucula kuyo amandla akho kunye nokoyisa ukusilela.
Ngaba uyafuna ukunciphisa umzimba okanye ukunciphisa umzimba?
Abantu abaninzi banethemba lokunciphisa umzimba ngokuthatha amayeza, ukwenza utyando, ukuya ejimini kanye ngeveki, ukubeka isaladi kwipleyiti yabo, okanye ukuthetha nengcali yezondlo. Esi sisikhundla sabo banethemba lokunciphisa umzimba.
Ngokwenyani, ngale ndlela yokucinga, unika ulawulo kwindalo yesisindo kwabanye. Gcina ukhumbula ukuba ungummeli wotshintsho lwakho.
Ukufuna ukunciphisa umzimba kukubeka isandla kwintlama kunye nokuqonda ukuba oyena mntu ufumana indlalifa enkulu kolu tshintsho nguwe. Kukubona isidingo sotshintsho, ukuhlangabezana nomceli mngeni, kunye nokuzama ukumilisela utshintsho olunye ngexesha ukuhlangabezana neenjongo zakho.
Ngaba unayo inzuzo yokuhlala utyebile?
Kuvakala njengombuzo ophambeneyo, kodwa ayisiyiyo. Rhoqo ezantsi ezantsi, kukho into elungileyo ngokuhlala njengoko injalo ngoku. Umzekelo, uvakalelo lokuba unomntu, njengomama wakho, umhlobo okanye isondlo esikukhathaleleyo. Okanye kusenokwenzeka ukuba ukutya kunika kuphela incasa onokuzinika yona, ngenxa yoko ukunikezela kunokuba ngumceli mngeni othintela ukuba wehle ubunzima.
Zilahle iingcinga ezizenzekelayo
Njengoko zibalulekile kwaye ziqhelekile njengoko iingcinga ezizenzekelayo zinjalo, zihlala zenzelwe ukuthintela ukufundiswa ngokutsha ngokutya. Eminye imizekelo:
Ukujikeleza kunye nokutya okuncinci kuyinkcitho, kuya kufuneka ndiyenze imali yam ukuba ixabise;
Andikwazi ukuqala ukutya kwam ngeempelaveki, ngoMvulo ndiyaqala ...
ukunciphisa umzimba kunzima kakhulu, ngaba kuya kufuneka ndithenge ukutya okubizayo ndize ndibhatalele umthambo?
Ukuze ndinciphise ubunzima, ukuba abantu bayandithanda ngale ndlela ndiyiyo?
Ukunqongophala kokutya lixabiso eliphantsi kushishino lwabantu.
Gcina ukhumbula ukuba ukutshintsha iinkolelo ngale ndlela yinto ebonakala ilula, kodwa kuya kufuneka ukhuphe zonke iingcambu, kungenjalo akukho nto itshintshayo.
yenza into ekonwabisa
Akukho nto ilunge ngakumbi kunemvakalelo yolonwabo kunye nentlalo-ntle. Ke ngoko, enye yeendlela zokuzikhuthaza kwaye woyise ukudimazeka kukwenza imisebenzi eyonwabisayo. Ukumamela iingoma zakho ozithandayo, ukuhambahamba epakini, ukuya elunxwemeni, imiboniso bhanyabhanya kunye neqonga, ukuphuma nabahlobo kunye nosapho, ngamafutshane, nantoni na iyakonwaba!
Akukho mntu ungcono kunawe ukwazi ngawe. Ke, yenza uluhlu olufutshane kwaye ubeke ngokulandelelana, ukusuka kwenye ukuya kwishumi, ezona zinto uzithandayo. Emva koko yenza konke okusemandleni akho ukuzenza, urekhode loo mizuzu ngeefoto kwaye wabelane ngazo nabahlobo bakho nakwindawo ekuhlaleni yaseDS. Emva komdyarho wokonwaba, akusekho sizathu sokuhlala siphantsi.
Ukufumana inkuthazo kulula kunokuba kuvakala, kodwa okokuqala, kuya kufuneka ufumane ukuba yintoni ekwenza uzive ulungile ukutshintsha imikhwa kunye nokunciphisa umzimba. Ukuba ngumsebenzi omtsha, ukuhlala kunye nosapho, imeko oqhele ukuya kuzo, inkampani yabahlobo. Olu lwazi lokuzimela lwenza ukufumanisa okukhulu kunye nokufunda, kwaye kuqinisekisa ukuba uhlala uvuselela inkuthazo yakho.
Okona kutya kulungileyo ukunciphisa umzimba
Ukutya okunengqondo, Indlela ekufundisa ukuba utye ngokwengqondo